उम्मेदवारले नै गरे चुनावमा सरकारी नम्बरको दुरुपयोग, काउन्सिलले थाल्यो कारबाही – Health Post Nepal
उम्मेदवारले नै गरे चुनावमा सरकारी नम्बरको दुरुपयोग, काउन्सिलले थाल्यो कारबाही
२०७८ मंसिर ३ गते १३:५७
अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनका लागि दुई उम्मेदवारले डाटा दुरुपयोग (चोरी) गरेर भोट मागेको कुरा बाहिर आएको छ।
काउन्सिलबाट नै नम्बरलगायतका विवरण उम्मेदवारहरुलाई उपलब्ध गराएको भन्दै चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरू गरेका छन्।
काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र ८ सदस्यका लागि ३५ जना चिकित्सक चुनावी मैदानमा छन्। आजबाट काठमाडौं उपत्यकाबाहिर निवर्चान सुरू भइसकेको छ।
‘चिकित्सकलाई अनुशासित गराउने मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सकहरुले दर्ता गर्दा बुझाएको मोबाइल नम्बर आउँदो चुनावमा ग्रुप एसएमएस गर्नलाई त्यहीँ कार्यरत डाक्टरको हात कसरी लाग्यो? कि स्रोत बताउनु पर्यो कि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको स्वीकार्नु पर्यो,’ डा. रामेश कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
काउन्सिलका उच्च पदाधिकारीको मिलेमतोमा दुई उम्मेदवार डा. कालुसिंह खत्री र डा. तोशिमा कार्कीले काउन्सिलको गोप्य डाटा दुरूपयोग गरी चिकित्सकहरुलाई भोट मागेको आरोप छ। काउन्सिलले चिकित्सकहरुलाई सूचनाका लागि प्रयोग गर्दै आएको ३७८८८ नम्बर दुरुपयोग गरेको उनीहरुमाथि आरोप छ।
यस विषयमा काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाएको बताए। ‘यस विषयमा हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ। हामीले सोध्ने, बुझ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ डा अधिकारीले भने।
यस विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन काउन्सिलले आकस्मिक बैठकसमेत बोलाएको छ। निर्वाचनको सदस्य उम्मेदवारमा उठेका डा. कार्कीले यस विषयमा सत्यता नरहेको दाबी गरिन्।
‘नेपाल चिकित्सक संघ चुनाव बेलामा चिकित्सकको सम्पर्क नम्बर राख्दै आएको थिएँ। साथीभाइसँग नम्बर मागेर एसएमएस गरेको हुँ,’ डा. कार्कीले भनिन्, ‘काउन्सिलले सूचनाका लागि प्रयोग गर्दै आएको ३७८८८ नम्बर संयोग हुन गएको हुनसक्छ।’
काउन्सिलको आधिकारिक नम्बरको दुरुपयोग गरी सबैलाई इमेल पठाउनु गल्ती हो।
‘बाहिर दुईजनाको नाम आएको छ। तर, सबै चिकित्सकको मोबाइलमा धेरै चिकित्सकले भोट गरेका छन्,’ कार्कीले भनिन्,‘ई-सेवाको एक कम्पनीले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। त्यही कम्पनीलाई नम्बर उपलब्ध गराएको थिएँ। तर, उसले एसएमएस पठाउँदा काउन्सिलले प्रयोग गर्ने नम्बर स‌ंयोग परेछ,’ डा. कार्कीले भनिन्।
कानुनले बिनाअनुमति अरुको डाटा प्रयोग गर्नुलाई अपराध मान्छ। डाटा चोरी भएको ठहर भएमा उनीमाथि कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।